UkuPhepha Isondlo esifanelekileyo
Kukho iintlobo ezininzi zeengqungquthela kwaye zonke zihlangene kunye nephunga elimnandi elikhunjulwayo ehlobo elitshisayo, enyanzelisayo kwaye, ngokuqinisekileyo, ilungele umzimba womntu kuzo zonke i-melon. Olu phuhliso lusetyenzisweni lwayo oluhlukeneyo, olugcwele iivithamini, eziza kuxutyushwa ngezantsi.
Iinzuzo ze-melon yomzimba
I-silicon, i-phosphorus, isulfure, i- potassium , i-iodine, i-magnesium, ii-vithamini C, PP, E, A, B1, B2 - konke oku kuqulethe isiqhamo esimnandi. Ngaphezu koko, iqukethe i-fiber, folic acid, ascorbic acid, i-pectins.
Ukuba unayo izifo zesimo senhliziyo, khusela ngokukhuselekileyo i-melon ekudleni kwakho, kuba iivithamini eziqulethwe kuyo, zinobunzima obukhulu kule ndawo. Ngoko, iingcali zincoma ukuba zisebenzise njengemilinganiselo yokukhusela i-atherosclerosis.
Ngenxa yokuba le yile diuretic kakhulu, i-melon treat treat should be eaten with a kidney disease. Ngaphezu koko, uyakwazi ukususa amanzi amaninzi emzimbeni wakho, ngelixa ukhulula kwiiyobisi ezahlukeneyo.
Kufanelekile ukungongeza kuzo zonke ezi ngasentla kunye neenzuzo zokuthi i-melon ikhona kwiphumo layo le-anthelmintic.
Kuze kube yimini, ngexesha lokuxinezeleka, ubunzima obungabonakali bomi, le mifuno iyakwazi ukubuyisela isimo sengqondo, oko kukuchaphazela inkqubo yesifo somntu. Isiphumo esinjalo siphumo ngenxa ye "hormone yolonwabo", i-serotonin, eyona mali eninzi kwi-pulp.
I-Fiber, ayiyikuphucula kuphela ukutya , kodwa ivelisa ne-cholesterol.
Ukuqhubela phambili ekubeni esi sihlobo sentsapho yamatope singama-90% samanzi, asiyikucima nje ukoma, kuphucula ukubonakala kwesikhumba, kodwa kususa namatye eentongeni kunye ne-bladder.
Izinzuzo ze-melon kwimpilo kukuba iqukethe i-ascorbic acid, ayiyikuphucula kuphela ukugaya, kodwa ilungiselela umzimba ngokubanda kwebusika kunye nezifo.
Ukuba sithetha ngambewu ye-melon, ngokokuba amadoda a-aphrodisiac, enefuthe kumandla wesilisa. Ngoko, iyeza lonyango licebisa ukuba lizitshabalalise ezingaphantsi kwama-2 amagremu ngosuku, zidibaniswe nobusi.
Iinzuzo ze-melon ngexesha lokukhulelwa
Inkcubeko ye-melon yinto ephilileyo yendalo, kwaye, ngenxa yokuba kukho utshintsho kwimvelaphi ye-hormonal, umama olindelayo uhlala eguquguqukayo, kwaye i-melon iyiluncedo kunanini ngaphambili.
Umxholo we-folic acid kuwo uncedo, kokubili kwisigaba sokulungiselela ukukhulelwa, kunye neyokuqala kwekota. Ngokungafani ne-watermelon, i-melon iyakususa ngokukhawuleza isisombululo emzimbeni, ngoko ke, ukuze ukhusele ukuvuvukala, yidle le ngongoma yendalo kwimigangatho embalwa ngosuku.
Xa kwenzeka ukugcinwa kwe-stool, i-melon pulp, equle inani elininzi lezityalo zityalo, kuya kunceda amathumbu omfazi okhulelwe. Ukuphucula umbala, sebenzisa i-melon crusts, ukunceda ukulahla, njengokusuka kwe-acne, kunye ne-acne, freckles, i-pigment spots.
I-calorie melon, iinzuzo kunye nenzakalo
Kwiphepha kulabo abalandela umzobo wabo, umxholo wekhalori weemifuno i-35 kcal kuphela. Enyanisweni, ukuba singathethi nje ngeenzuzo zayo, kodwa kunye nezakhiwo zayo eziyingozi, kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba i-melon iyaphikisana:
abantu abanezifo zesilonda;
Oomama abanomntwana (umntwana usenokuba nesisu esicasulayo).
Yaye khumbula ukuba kufuneka kudliwe iiyure ezimbini emva kwesidlo esikhulu. Ukongeza, musa ukudibanisa ukutya i-melon kunye nezinye ukutya, ukuze ungabhubhisi.
Umxholo we-caloric we-shish kebab ovela kwingulube
Yintoni eluncedo kwiidiliya?
Ngaba ndinokuphucula kwimbewu?
Kutheni ndikwazi ukuhlamba ukutya?
Yintoni eyiluncedo kumphunga we-maple?
Kutheni amaYuda angadli inyama yengulube?
Ioli ye-soya - ingozi kunye nenzuzo
Luhlobo luni lweziqhamo endinokuyitya kunye ne-pancreatitis?
Ngaba ndingakwazi ukulahlekelwa bunzima xa ndineentonga?
Ibanga lihle kwaye libi
I-tea yeKuril - izakhiwo ezixhamlayo kunye nokuchasene
Yintoni eluncedo kwi-honey agarics?
INkosana uWilliam kunye noKate Middleton abayi kuqhawula umtshato
Izinto eziphathekayo-entwasahlobo-ehlobo ngo-2014
I-Decoupage yamanzi amanzi
Ijee ezihlaza - i-festive basis for a bright and stylish image
Upheka njani intliziyo yenkomo?
34 abadumileyo, ababonakala ngayo iqabane elingengowona nto
Imikhombiso yeFashion - Spring 2015
I-Alaska isitya kunye nemifuno
Izikhwama ezenziwe ngefestile ngo-2014
Indlela yokwenza i-Decembrist iqhakaze?
Itafile yecala lembhedlele yezihlangu
I-ointment kwiintsikelelo ezithende
Amathambo egromegranate - okuhle nokubi
Indlela yokuhlamba i-cashmere - imithetho elula yokuhlamba ngokufanelekileyo nokukhuselekileyo
Ukuvalwa kwamanzi kumgangatho womhlaba
UHanna Bronfman wazisa iqoqo le-gel-varnishes engapheliyo ye-OPI brand
I-gymnastics yokuqhaqhafaza yabantwana abasenkulisa - isethi yokuzilolonga